Hamro Kantipur | विशेष कानुनको अभाव: विदेशमा रगतपसिना बगाएर फर्किंदा न श्रीमती न सम्पत्ति! विशेष कानुनको अभाव: विदेशमा रगतपसिना बगाएर फर्किंदा न श्रीमती न सम्पत्ति!
विशेष कानुनको अभाव: विदेशमा रगतपसिना बगाएर फर्किंदा न श्रीमती न सम्पत्ति!
काठमाडौं, पछिल्लो समय बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारीले देशमा रेमिट्यान्स त भित्र्यायो । तर, यसले सामाजिक सम्बन्ध र धेरै परिवारलाई छिन्नभिन्न पनि पारेको छ । छोरा विदेश जाने, बुहारी सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ । देशका अधिकांश गाउँघरमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन् ।
श्रीमान् विदेशमा दुःख गर्ने, श्रीमती यता पैसा उडाउने गरेका घटना थुप्रै देखिएका छन् । विदेशमा रगतपसिना बगाएर फर्किंदा न श्रीमती न सम्पत्ति न त आफन्तकै अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता घटनामा पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन कानुन अभाव देखिएको छ । श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को बिहे गर्ने पुरुषले बहुविवाहमा सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तै अवस्थामा महिलालाई सजाय छैन । पहिलो श्रीमान्सँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।